Maqaallada Kate Zeid on Martech Zone |
Maqaallada by Kate Zeid
Kate Zeid, haye DAN Kobaca & Hawlgallada SVP: Waxaa soo kiraystay Hey DAN shirkaddiisa waalidka ee Civicom si ay u keento badeecooyin cusub kooxda 2005, Kate Zeid waxay madax u tahay kooxda kobaca iyo hawlgallada Hey DAN. Kate waxa ay ka shaqeysaa horumarinta wax soo saarka, suuqgeynta, adeegga macaamiisha iyo kartida waxayna sii waddaa kobcinta dakhliga iyada oo loo marayo maalgashiga gen soo socda.
Hey DAN: Sidee codka CRM u xoojin karaa xiriirkaaga iibka oo uu kuugu ilaalin karaa miyir-qabka
Arbacada, Nofeembar 3, 2021 Arbacada, Nofeembar 3, 2021 Kate Zeid
Waxa jira shirar aad u badan oo lagu xidhi karo maalintaada oo aan ku filnayn wakhti aad ku duubto dhibcaha taabashada qiimaha leh. Xitaa ka hor masiibada, kooxaha iibka iyo suuqgeyntu waxay caadi ahaan lahaayeen in ka badan 9 shirar dibadda ah maalintii oo hadda leh gogosha gogosha fog iyo isku-dhafka ah ee shaqeynaya muddada fog, tirada shirarka casriga ah ayaa kor u kacaya. In la ilaaliyo diiwaanka saxda ah ee shirarkan si loo hubiyo in cilaaqaadka la kobciyo oo xogta xiriirka qiimaha leh aan la lumin waxay noqotay